Toamasina: “Héroïnes” milanja 40 kilao saron’ny ladoany - ewa.mg
News - Toamasina: “Héroïnes” milanja 40 kilao saron’ny ladoany
“Héroïnes » manodidina ny 40 kilao teo no tratran’ny ladoany ( Service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande, Brigade des stups) tany Toamasina, omaly. Niara-niasa ny CSI (Comité pour la sauvegarde de l’intégrité), le CRFIM (Centre régional de fusion d’informations maritimes) nampian’ny FIP sy ny zandary no nahasarona ity tambazotra ity.
Efa tao anaty fiara 4×4 iray saika hiala tany Toamasina no tratra ireo zava-mahadomelina ireo. Tao anaty valizy nafenina anaty lamba. Rehefa nosavaina ilay fiara ka tratran’ny manampahefana tamin’izany. Olona maromaro no voasambotra ary mandeha ny famotorana.
Tranga mahazo vahana eto amintsika ny fiparitahan’ny zava-mahadomelina mahery vaika. Matetika any Maorisy no misy olona tratra avy aty amintsika. Fantatra fa firenena andalovan’ny “Héroine” eto amintsika, ary mandeha any amin’ny firenena hafa avy eo. Efa maro ihany koa anefa ny manjifa azy ity eto amintsika, ary miparitaka eto an-dRenivohitra izany.
L’article Toamasina: “Héroïnes” milanja 40 kilao saron’ny ladoany a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 23/04/2019
Governemanta Ntsay : Nokianin’ireo senatera
Tsy nisy nandaharana mihitsy. Izay no nilazana ny fihaonan’ny governemanta tamin’ireo loholona, omaly, tetsy amin’ny Antenimieran-doholona, etsy Anosy. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fandaharam-potoan’ny fivoriambe ara-potoan’ny parlemantera mantsy ny fihaonana eo amin’ny roa tonta. Tsy nisy alaharo alaharo fa avy hatrany dia nopotsirin’ireo senatera tamin’ny voamasony ny fihaonana. Saika ireo tonga nivory tamin’izany dia nanakiana ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian avokoa. Anisan’ny nibahan-toerana ny fanakianana mahakasika ny fifidianana. Nambaran’ireo loholona nandray fitenenana tamin’izany fa tsy misy nandeha tamin’ny laoniny, ary kitoatoa iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany, notanterahina ny 7 novambra teo iny. Maro, hoy izy ireo, ny tsy fahatomombanana mahakasika ny lisi-pifidianana. Teo ihany koa ny fanomanana sy ny fikarakarana tsizarizary, ka nampiteraka izao savorovoro eto amin’ny firenena izao. Ao, hoy hatrany izy ireo, ny mangataka fanafoanana ny voka-pifidianana sy ny fifidianana mihitsy aza, indrindra fa ny firaisan’ireo kandidà, noho ny tsy fahatomombanana tsikaritra hatrany… Anisan’ny tena nampimenomenona ireo loholona tamin’izany mantsy ny fahamaroan’ny fahadisoana teo anivon’ny lisimpifidianana sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Niraisan’ireo loholona kosa ny hoe “tsy voafehin’ny governemanta Ntsay Christian” ny fanomanana ny fifidianana Filoham-pirenena tamin’ity taona 2018 ity. Eny, fa na niezaka ny nanamarin-tena sy niezaka ny nanazava aza ny governemanta sy ny praiminisitra Ntsay Christian, nanoloana ny fanakianana nahazo azy ireo, tsy naharesy lahatra ireo senatera velively izany, satria dia tsapan’izy ireo fa tsy mahafehy ilay andraikitra nanirahana azy izy ireo… MN L’article Governemanta Ntsay : Nokianin’ireo senatera est apparu en premier sur .L’article Governemanta Ntsay : Nokianin’ireo senatera a été récupéré chez Triatra.
Mila mifampitandrina, mifampiaro, mifampiteny…
Amin’izao fialana miandalana amin’ny fihibohana ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 izao, misy na be ny efa faly volony ambony ihany. (Ho) vita hatreo amin’izay ny ady mafy sy sarotra ary ela? Enga anie… Mandihy tsy afa-tavony? Na misiaka mbola tsy tafavoaka ny ala… Eny ho eny sahady, ohatra, no tsy miraharaha na tsy mitandrina firy intsony ireo fepetra ara-pahasalamana amin’ny fiarovan-tena hiarovana ny hafa, indrindra amin’izato fisokafana tsikelikely eo amin’ny sehatry ny fita­terana. Maika sy mitady hiraparapa amin’ny fitadiavana sy ny fiverenan’ny fiainana andavanandro amin’ny laoniny? Na izany aza, mila mitandrina hatrany ny tena fa tsy hita maso ny fahavalo: efa tena resy tanteraka? Eny, na efa mafana aza ny toetrandro, mitombo isa hatrany ny marary sitrana hoe tsy mamindra intsony, mihena ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina… Aleo mitan­drina; eny, na misy aza ny fanefitra sy ny fanafody. Toy ny hoe miseho ho inona ny tena raha sarotiny amin’izany? Tsy misy tokony hahamena-maso fa ny fia­rovan-tena no hiarovana ny hafa. Tsy kely ve no niandohan’ny valanaretina? Ny tsy fitandremana kely no mety hamoa-doza lehibe ary ny tsirambina ataon’ny vitsy no hitera-pahavoazana ho an’ny maro. Izay no ifampite­nenana? Raha hentitra sy henjana amin’ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, ohatra, ny mpitandro filaminana ary tokony hanohy izany hatrany: mila hentitra sy henjana koa ny tsirairay miaraka amin’ny rehetra… tsy anavahana. Mitohy hatramin’ny farany ny ady, izay tsy inona fa ny fahazoana miaina malalaka toy ny teo aloha. Mety ho fiaraha-miaina amin’ny valanaretina toy ny aretina hafa manana ny fotoany isan-taona, ohatra, izay fahazoana miaina malalaka izay? Izay no itandremana hatrany, tsy ho am-boalohany ihany. Fahaiza-miaina amin’ny aretina? Fahaiza-miaina amin’ny hafa koa amin’ny fifampitandremana, ny fifampiarovana, ny fifampitenana…Rafaly Nd.L’article Mila mifampitandrina, mifampiaro, mifampiteny… a été récupéré chez Newsmada.
FOMBA SY KOLONTSAINA MALAGASY :: Hamelabelatra ny hevi-dalin’ny “Sikidy malagasy” i Eris Rabedaoro
Ventin-dresaka anisan’ny tsy mampitovy fomba fijery ny Malagasy maro, ankehitriny, ny tontolon’ ny fomba nentim-paharazana sy ny fanandroana. Ho an’ izay liana sy te-hahafantatra misimisy kokoa ny momba izany, dia hisy famelabelaran-kevitra manodidina izay kolontsaina anisan’ ny mampiavaka ny Malagasy, izay hiarahana amin’i Eris Rabedaoro, ny zoma 30 novambra ho avy izao. Ny efitrano Famoloana ao amin’ny Ivon-toeran’ ny kolontsaina malagasy (IKM) Antsahavola no hanaovana ny hetsika, manomboka amin’ny 6 ora hariva. “Ny sikidy malagasy” ny lohahevitra hovoaboasany amin’ izany. Anisan’ny zana-dohahevitra horesahiny ao ny tantaran’ny “sikidy”, toy ny fototra niaingany. Havohitrany mandritra ny fihaonana ihany koa ny hasina sy ny toeran’ny sikidy eo amin’ny fiarahamonina. Ho an’izay te hanatrika, efa misokatra ny fisoratana anarana eny amin’ny IKM Antsahavola. Dimy arivo ariary kosa ny saran’ny fandraisana anjara. Mpandala ny maha Malagasy, mpahay tantara, mpikaroka ary mpandalina ny fomba nentim-paha- razana i Eris Rabedaoro. Sehatra anisan’ny tena ahafantaran’ny besinimaro azy ny tontolon’ny fanorona, izay nanaovany fikarohana nandritra ny fito amby roapolo taona. Marobe ny boky nosoratany mikasika ny soatoavina sy ny kolontsaina malagasy. Tanjona amin’izao fizarana fahalalana izao ny hananan’ ny Malagasy fomba fijery hafa sy hanitsiana ny fiheveran- diso mahakasika ny sikidy. L’article FOMBA SY KOLONTSAINA MALAGASY :: Hamelabelatra ny hevi-dalin’ny “Sikidy malagasy” i Eris Rabedaoro est apparu en premier sur AoRaha.
Mila miroso hatrany aloha…
Ny zavatra tena fantatra, hono, no mahatonga ny fahatahorana azy, na izay tena tsy fantatra tanteraka ny momba azy no mampatahotra. Ny mahay rano ihany no maty an-drano? Na izay vato alatsaka no maty ho azy… Ny fahalalan-javatra eo ho eo ihany no anisan’ny mahatonga ny fanaovana tsirambina, kitsapatsapa, fahasahisahiana tampoka tsy iomanana na tsy ampoizina…Manao ahoana àry ny mety ho fihetsiky ny isam-batan’olona amin’izao hoe fahitana sy fampiasana ny fanefitra sy fitsaboana ny valanaretina coronavirus izao? Eo ny tsirairay handinika, hanapa-kevitra… Ny itsokotokoan’ny loha, samy manana ny heviny. Na izany aza, lazaina mandrakariva ny hoe fahavalo tsy hita maso ny otrikaretina coronavirus ary iombonana ny ady aminy.Amin’izany, sao ny fahitana sy fampiasana izany indray no mampifanditra an-toerana, sanatria? Ny amisavisana ny ratsy mba hiavian’ny soa. Misy ny tena mahalala sy mahay ary ao ny tsy maharaka inona akory. Izany no mampisaritaka an-toerana? Miseholany ny karazana fanehoan-kevitra, famoahana fanambarana, fanontaniana mila valiny, ahiahy tsy ihavanana… Ho tonga hatraiza?Tsy mahataitra ny toy izany, amin’ny fisiana na fivoahan’ny zava-baovao amin’izay atao? Mety misy aza ny fitsikerana mahery vaika, na fanoherana befahatany, na fankahalana fotsiny izao… Ny tsy fisian’ny toy izany aza no toa hafahafa be ihany? Toy ny hoe tsy fahitana, tsy firaharahana… Na izany aza, tsy hita maso ity hoe iadiana. Raha ady iombonana, tokony hampiombona.Tsy ilaina ve ny fanohizana fanazavana bebe sy lalindalina kokoa hatrany hahatsara zavatra? Natao hiova sy hivoatra ny zava-drehetra: izay tsy mandroso, mihemotra. Sao izay hita sy fantatra indray no atahorana, sanatria? Na misy zavatra mbola tsy tena fantatra ao, na mampitranga mihemotra ny sasany… Mandra-pitrangan’izay hitranga, mila miroso na ady sarotra aza ny atrehina.“Rehefa mafy ny mandroso, dia ireo mafy no mandroso”, hoy ny filoha amerikanina iray, i John Fitzgerald Kennedy.Rafaly Nd. L’article Mila miroso hatrany aloha… a été récupéré chez Newsmada.
Ceni – Propagandy : “Aoka tsy ho fanaratsiana…”
“Ho lasa mpikambana ao amin’ny andrimpanjakana lehibe eto amin’ny tany sy ny firenena ianareo kandidà voafidy amin’ny alalan’izao fifidianana karakaraina izao. Lasa loholona ianareo, toeram-boninahitra sady manan-kaja ary maodelin’ny fiarahamonina izany”. Hafatry ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, ho an’ny mpirotsa-kofidina tamin’ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana loholona, omaly izany.Mandritra izao fampielezan-kevitra izao, aoka ho hita soritra amin’ny ataon’ireo kandidà sy izay teneniny izany fenitra izany maodelin’ny fiarahamonina izany. Toy izany indrindra koa ny soatoavina malagasy: ny fihavanana. “Aoka ny fanentanana sy ny fandraisam-pitenenana ataontsika tsy hahitana fanaratsiana olona fa hifototra amin’izay hataontsika raha tonga eo amin’ny toerana isika”, hoy izy.Aoka koa hanaja toy ny anakandriamaso ny didy aman-dalàna mifehy ny tanindrazana ireo kandidà sy ny antoko politika. Aoka ho tsara fijoro eo anatrehan’ny tany ama-monina ireo kandidà ka ho hita tokoa hoe olona manan-kaja, mendrika ary maodely eo amin’ny fiarahamonina izy ireo. Raha voahaja izany tanjona rehetra izany, ho maodely hatrany eo amin’ny faritra misy azy izy ireo. Hifarana amin’ny 9 desambra ny fampielezan-kevitra.R.Nd. L’article Ceni – Propagandy : “Aoka tsy ho fanaratsiana…” a été récupéré chez Newsmada.
Emploi et services Rédacteur et/ou copywriter et/ou écrivain et/ou scénariste.
INFORMATION CONCERNANT L’ENTREPRISEBasée en France et en Espagne, SEONOV existe depuis 2011 et est spécialisée dans la conception et la rédaction du contenu web, le webmarketing et la gestion informatique. MISSIONSVous commencez bien! Vous vous sentez capable de relever un défi à la hauteur de vos compétences? Alors rejoignez-nous!Évoluez au sein d’une équipe passionnée et collaborons ensemble pour faire face aux challenges du numérique.Nous recherchons un rédacteur et/ou un copywriter et/ou écrivain et/ou scénariste. Homme ou Femme.Dans le cadre de notre développement, nous voulons 8 collaborateurs salariés.La mission consistera à rédiger des contenus percutants pour des sites sur des thématiques très variées. PROFILEncore un petit effort! Ce que nous valorisons, n’est pas forcément le nombre d’années d’expérience, mais plutôt des personnes passionné pour la rédaction, qui ont un ardent désir d’apprendre. Vous êtes: COMPÉTENCES REQUISES C’est presque fini! Si vous pensez pouvoir correspondre au profil et que vous avez: AVANTAGESSuper vous êtes encore là, c'est le premier signe de votre motivation ! Ce que nous vous offrons: Envoyez votre CV, pas besoin de lettre de motivation, nous vous demanderons à la place de passer un test de 300 mots.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Rédacteur et/ou copywriter et/ou écrivain et/ou scénariste.".
A louer Location voiture 4×4 et voiture Légère
Location 4×4 et voiture légèreLand Cruiser New Prado 120Voiture très confortable, vitre électrique, toit ouvrant, 5 portes, clim, Location: Journée ville, circuit touristique, Transfert, mariage,Création circuit sur mesureContact:Tel: 0348474764Facebook: Ranaboharison RindraMail: rindranyony@gmail.comCliquez sur le lien pour en connaître plus sur "A louer Location voiture 4×4 et voiture Légère".
Ho fampananan’asa ny tanora sy fampiroboroboana ny nomerika. Hotokanana tsy ho ela eto Madagasikara ny Orange Digital Center (ODC). Nisy ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ny Orange sy ny GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), eo ambany fiahian’ny Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) ny volana desambra 2019 momba famatsiambola 30 tapitrisa Euros ho fampiroboroboana ny fampanan’asa ho an’ny tanora, ny fandraharahana sy ny sehatry ny nomerika amin’ny firenena 14 eto amin’ny kontinanta afrikanina sy Moyen-Orient. Ho fampivoarana ny fifehezana ny nomerika ho an’ny tanora miisa 20.000 sy ho famoranan’asa maherin’ny 8000 ity fandaharan’asa “develoPPP.de” any BMZ. Ho fampiharana izany eto Madagasikara dia niroso tamin’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa ny Orange Solidarité Madagascar sy ny GIZ Madagascar amin’ny fametrahana ny Orange Digital Center (ODC). Ivon-toerana mampivondrona fandaharan’asa efatra manome fiofanana ho an’ny tanora momba ny nomerika, manohana ireo “start-up” ary manampy amin’ny fitadiavana famatsiambola ny ODC. Hita ao anatin’ny ODC ny sekoly nomerika na ivon-toerana momba ny teknolojia. Malalaka ny fidirana ao aminy ary maimam-poana, mikarakara fiofanana, hetsika sy fanohanana ho an’ireo “développeurs”, “geeks” ary tompona tetikasa. Eo ihany koa Fablab Solidaire, ivon-toerana ahafahana mamorona amin’ny sehatry ny nomerika amin’ny alalan’ny fitaovana nomerika, misokatra ho an’ny daholobe fa anisany natao ho an’ny tanora tsy manana diplaoma sy tsy an’asa ihany koa izy ity. Ankoatra izany dia hahazo tombontsoa amin’ny alalan’ny ODC ihany koa ireo mpandraharaha noho ny fisian’ny Orange Fab sy ny Orange Digital Ventures Africa satria hanampy azy ireo amin’ny fampiroboroana ny tetikasan’izy ireo sy fahazoana famatsiambola. Ho an’ny Orange Digital Ventures Africa manokana dia manana famatsiambola 50 tapitrisa Euros hamatsiana ireo start-ups amin’ny firenena afrikanina sy faritra Moyen-Orient ity rafitra ity. Nirina R. Cet article ORANGE DIGITAL CENTER : Hahazo tombony ireo tsy an’asa sy tsy manana diplaoma est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article ORANGE DIGITAL CENTER : Hahazo tombony ireo tsy an’asa sy tsy manana diplaoma a été récupéré chez Délire Madagascar.
« Hetsika vidin’entana »: nasian-teny manokana ny fahalafosan’ny vidim-bary
Nanaovana jery todika ny « Hetsika vidin’entana », omaly, fepetra noraisin’ny minisiteran’ny ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana (Mica), nanomboka ny volana desambra 2020 hatramin’ny febroary ho avy izao. Amin’ny ankapobeny, hita fa mahomby io fepetra fanaraha-maso eny an-tsena io, eto Antananarivo sy ny manodidina. Nasian-teny manokana kosa, avy amin’ny fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa ny vidim-bary. “Tsy tratra ny tanjona amin’ny fifehezana ny vidim-bary, raha jerena ny fahalafosan’ny vokatra avy eto an-toerana, izay efa tafakatra 800 Ar ny kapoaka”, hoy izy ireo. Safidin’ny mpanjifa ny voka-bary eto an-toerana, no ho ireo avy any ivelany na mora vidy aza.13 ny faritra mamoka-bary : misy mahavatsy ny ao aminy, ny sasany tsy ampy ny vokatra miakatra, ireo faritra hafa kosa tsy maintsy vatsina mandritra ny taona. Olana izany, kely ny vokatra miakatra noho ny antony maro, toy ny tsy fisian’ny lafiny teknika momba ny fambolena, fa eo indrindra koa, amin’izao fotoana izao, ny tsy fahampian-drano. Noho izany, miara-miasa ny minisitera roa : misahana ny fambolena sy ny varotra.Paikady amin’ny 2021Ventin-kevitra iray nambara ny paikady hatomboka amin’ity taona 2021 ity, ny hitsinjovana ny vidin’entana sy ny kalitaony takatry ny mpanjifa amin’ireo vokatra ilaina isan’andro (vary, siramamy, menaka, lafarinina …). Hametrahana vaomiera manokana izany, hahitana ny solontenan’ny Mica, ny fikambanan’ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa, ny lehiben’ny tsena, ny avy amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Ilaina ny fanabeazana sy ny serasera ho an’ny mpivarotra sy ny mpanjifa.Nambara koa ny fametrahana vaomiera iray hafa, afaka miditra manara-maso eny anaty tsena. Tanjona ny faharetan’ny fanaraha-maso miaraka amin’ny lehiben’ny tsena. Nambara fa tokony hofaritana ny fe-potoana fiasan’ny lehiben’ny tsena ; ny fanasaziana tokony hatao amin’ireo tsy manara-dalàna. Tolo-kevitra nambara koa ny hisian’ny tsena manokana, sy ny fiaraha-miasa amin’ny fokontany. R.MathieuL’article « Hetsika vidin’entana »: nasian-teny manokana ny fahalafosan’ny vidim-bary a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina sy zavakanto taona 2021: samy mbola mifampijerijery ny rehetra
Volana maro, niaina tao anaty fihibohana ny kolontsaina sy ny zavakanto maneran-tany. Toraka izany koa ny eto Madagasikara. Nihantona avokoa ny fandaharam-potoana efa novolavolaina ela…… Voalohandohan’ny taona tahaka izao, efa zary mampahafantatra ny fandaharam-potoany ny ankamaroan’ny mpanakanto. Tahaka izany ihany koa ireo fikambanana maro isan-tsokajiny. Ao ny milaza fa hanatevina sy hanatsara ny vita teo aloha. Ankehitriny, efa misasaka ny volana janoary, mbola mifampijerijery avokoa ny rehetra (mpanakanto, mpikarakara hetsika, trano fandraisana hetsika, fikambanana misahana raharahan-kolontsaina…). Hanao ahoana ny ho fivoaran’ity valanaretina ity? Miankina indrindra amin’ny valin’io fanontaniana io ny ahafahan’ny tontolon’ny kolontsaina sy ny zavakanto mihetsika sy manao zavatra.Misy ihany anefa ireo tsy hanova fa hitazona hatrany ny fotoana hanatanterahana ireo hetsika efa fanaony isan-taona. Ny ankamaroan’izy ireny, hotanterahina any anivon’ity taona 2021 ity avokoa (volana jona, jolay, aogositra). Nanterin’izy ireny anefa fa fotoana ihany io fa miankina indrindra amin’ny fivoaran’ny valanaretina Coronavirus sy ny fepetra mifanaraka amin’izany ny ho fanatanterahana hetsika na tsia.HaRy RazafindrakotoL’article Kolontsaina sy zavakanto taona 2021: samy mbola mifampijerijery ny rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Ho fanandratana ny kolontsaina malagasy amin’ny alalan’ny famolavolana ny olona eny anivon’ny kaominina sy faritra Avaradrano ny antom-pisian’ny Mpiava, izay rantsana iray eo anivon’ny Fi.mpi.ma.“Izay tia ny tenin-drazany, tia ny tanindrazana”… Mitohy ny fampianarana kabary maimaim-poana, izay tanterahin’ny Fi.mpi.ma( Fikambanan’ny mpikabary malagasy) sampana Mpiava ( mpikabary Iarivo Avaradrano) ho an’Antananarivo Avaradrano. Tsy ho diso anjara amin’izany ny kaominina Talata-Volonondry, rahampitso, asabotsy 16 janoary 2021 manomboka amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro. Izany dia hotanterahina ao amin’ny EPP Talata-Volonondry, tafiditra ao amin’ny andia “Aviavy”. Izany no tanteraka dia vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny ben’ny Tanàna, i Hobiherisaona Randrianirina, ary ny kaominina Talata-volonondry, “Mba ho Tanana miara-mandray ary fo miara-mitepo ho fampitana ny soatoavina malagasy, indrindra mba ho fitaizana ireo vahoaka zanaky ny tanàna sy hoenti-mampandroso ny faritra”, araka ny nambaran’i Arison Olivier Boniface, filohan’ny Mpiava am-perinasa. Tanjon’izy ireo moa ny handrakotra sy hampianatra kabary ny kaominina rehetra eto amin’ny distrikan’Avaradrano. Hetsika efa fanaon’izy ireo hatrany moa ny fampianarana maimaim-poana ho an’ny kaominina isan-karazany hoenti-mamolavola ny rehetra ho olombanona sy ho sahy handray andraikitra, raha ny filazany hatrany. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra hatrany ny Mpiava ho an’izay mila izany. Antoka iray mampandroso ny firenena ny kabary.NarilalaL’article Avaradrano – Talata-Volonondry : hampianatra kabary maimaim-poana ny Mpiava a été récupéré chez Newsmada.
Fambolen-kazo 2021: tanjona ny hamerenana ala maitso
Sokafana rahampitso any Taolagnaro, faritra Anosy, ny fotoam-pambolen-kazo 2021. Mitarika ny fotoana ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Ritra ny rano any an-toerana sy amin’ny faritra maro noho fahapotehan’ny ala amin’ny afo. Raha any Anosy manokana, mahazo rano ihany ny ilany atsinanana fa maina tanteraka kosa ny avaratra sy ny avaratra andrefana. Maina ny tany volena, tsy mahita rano hosotroina hatramin’ny biby. Tsy misy ala intsony mamatsy rano ny reniranon’i Efao. “Ilaina ny famerenana ny ala, antoka lehibe ny famatsian-drano amin’ny faritra atsimon’ny Nosy manontolo”, hoy ny talem-paritra ny fitantanana ny ala, Razafindrahanta Hanitriniaina.Satria hita taratra ny fahavoazana ateraky ny haintany, noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana. Araka ny fanadihadiana nataon’ny WWF, anatin’ny faritra mafana indrindra manerana izao tontolo izao i Madagasikara, noho izay faharavan’ny ala izay. 1,3 tapitrisa ha ny ala rava teo anelanelan’ny 2002 sy ny 2019. Koa tanjona ny famatsian-drano ampy. Avy amin’ny reniranon’i Mandrare sy i Efao, raha ho an’ny faritra Androy sy Anosy. Tokony hiainga avy amin’izay ny tetikasa hiadiana amin’ny kere. Tsy misy safidy hafa afa-tsy ny fambolen-kazo hamerenana ny ala.Mbola nahazo vahana izay doro ala izay tamin’ny 2020, raha ampitahana ny efatra taona farany, araka ny tatitry ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Fanamby napetraky ny fanjakana amin’ity 2021 ity ny hamerenana maitso an’i Madagasikara ka zana-kazo anarivony maro no volena, handraisan’ny ankizy mpianatra anjara.Raha tsy misy fepetra …Tsara marihina anefa fa tsy ho tratra mihitsy ny tanjona, raha tsy misy fepetra manamaivana ny fiainam-bahoaka, indrindra eo amin’ny lafiny angovo. Satria mitombo hatrany ny filàna amin’ny saribao, tsy takatry ny maro ny vidin’ny herinaratra sy betsaka ny faritra tsy ahitana izany. Tsy vao sambany nisy fambolen-kazo « ofisialy » ny fiandohan’ny taona toy izao, saingy tsy hita izay vokany. Ny orana efa tsy misy, ny fanaraha-maso tsy ampy. R.MathieuL’article Fambolen-kazo 2021: tanjona ny hamerenana ala maitso a été récupéré chez Newsmada.
Toetr’andro: hitondra orambe matevina ilay rivodoza Eloise
Tombanana hiditra an-tanety amin’ny tapany avaratry ny faritra Analanjirofo ilay rivodoza Eloise, anio alina na rahampitso maraimbe, amin’ny tanjaka « forte tempête tropicale ».Heverina hitondra orambe mety hiteraka fiakaran’ny rano amin’ny faritra sasany ity rivodoza ity. Ho betsaka ary hijojo tokoa ny rotsak’orana amin’ny faritra maro any avaratr’i Madagasikara sy ireo toerana vinavinaina handalovany.Hihoa-pampana, araka izany, ny rotsak’orana ny 20 sy ny 21 janoary 2021 satria mety hihoatra ny 100 mm ao anatin’ny 24 ora. Mila mailo sy hitandrina ny amin’ny mety hisiana tondradrano sy ny fiakaran’ny rano amin’ny endriny samihafa ny mponina. Atahorana ihany koa ny mety ho fihotsahan’ny tany, arakaraka ny toerana.Ho fiomanana sahady amin’ny fihaviany, napetraka ny filazana mikasika ny rivodoza, loza manambana miloko mavo. Maharay izany ny faritra Analanjirofo, Andapa, i Sambava, Antalaha, i Toamasina I-II, i Bealanana, i Befandriana Avaratra, i Mandritsara ary Andilamena.Filazana loza fanairana miloko maitso ho an’i Vohemar, i Brickaville, i Vatomandry, i Mahanoro, i Moramanga, Ambatondrazaka ary Amparafaravola.Mila manaraka ny toromarika omen’ny manam-pahefana eny ifotony ireo mponina voakasiky ny filazana rehetra. Ny mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka avaratr’i Vatomandry sy ny avaratra andrefana dia entanina ihany koa tsy hiandriaka intsony.Hikorontana ny toetry ny andro eny an-dranomasina manomboka anio vokatr’io rivodoza io.Mety hahatratra 40 hatramin’ny 60 km/ora ny herin’ny rivotra arahina tafiotra ary manomboka hisy fiantraikany any amin’ny morontsiraka afovoany sy avaratra atsinanan’ny Nosy izany.Hahazo vahana hatrany ny talio amin’ny morontsiraka avaratra andrefana. Tsy tokony hiandriaka intsony ny mponina ary mitsahatra ny fifamoivoizana an-dranomasina.Tatiana AL’article Toetr’andro: hitondra orambe matevina ilay rivodoza Eloise a été récupéré chez Newsmada.